दूर्जेय चेतना: मेरो हटमेलको कुरा
Browse » Home » गफै त हो , विचार » मेरो हटमेलको कुरा
10 comments to “मेरो हटमेलको कुरा”
ईमेल को रमाईलो स्मरण रहेछ, हटमेलबारे !
आफूले भने हटमेल अहिलेसम्म प्रयोग गरेको छैन, याहु, एओएल हुँदै जिमेल चलाउन थालिएको छ ।
आकार जी नयाँ पुस्ता क्या , नयाँ पुस्ता..
प्रविधिका पुराना कुरा सुन्दा त हाँसो उठ्ने रहेछ भन्या!!!! मैले ईन्टरनेट चलाउन सिक्दा चाहिँ याहु च्याट एकदमै फेमस थियो ।
यसै त समय चाँडै वितेको झैँ लाग्ने....त्यसमाथि यो सुचना प्रविधि अनि सामाजिक संजालको त झन् के कुरा गरी साध्दे छ र!!!!!
रमाईलो लाग्यो पढ्न ।
Ashesh जी यो कुन मैल प्रयोग गरेर ईन्टरनेट चलाउन जानियो भन्ने क्रममा मान्छे कुन पुस्ताको हो भन्ने जान्न सजिलो होला जस्तो लाग्यो है मलाई हाहाहा।।
रमाइलो सम्झना रहेछ । मेरो पनि सुरुवाती दिनमा यस्तै यस्तै कथा थिए । सुरु-सुरुमा हटमेल, याहूमेल र अन्य केही मेल एकै चोटि बनाएको थिएँ ....पछि ती मध्य धेरैको त पासवर्ड बिर्सेर खुल्दा पनि खुलेनन् ।
सुरुमा 'पेड-इमेल' लिनेहरू अलि 'विशेष' हुन कि जस्तो लाग्थ्यो । आजकल भने त्यो बेकार जस्तो लाग्छ । नि:शुल्क र विविध सुविधा सहितका इमेल प्रदायक हुँदा-हुँदै त्यो भन्दा कम सुबिधा र सुरक्षा हुने इमेल लिनु कुनै बुद्धिमानी हैन जस्तो लाग्छ ।
तपाईँको पोस्ट पढिरहँदा धेरै पुराना कुराहरूको सम्झना भयो , रमाइलो लाग्यो :)
मेरो लागि चाहिँ एकै साथ सबै ईमेल जानकारीमा आएन। पहिले हटमेल आयो। हटमेलमा निकै जान्ने भईटोपलेकै बेला, याहु आयो। याहूमा च्याट गर्ने र ईमेल सिक्दा सिक्दै एक जना साथीले जीमेलको लिंक पठाईदिनु भो। त्यस पछि ईमेलका लागि हटमेल प्रयोग हुन छोड्यो, जीमेलनै बढी। अनि याहु मात्र च्याट गर्न प्रयोग हुदैछ। अझ अब त स्काईप अनी अझै iphone मा भाईबर आए पछि कुरा गर्न र सम्पर्क गर्न सजिलो भाको छ।
एकदमै रमाइलो संस्मरण सुनाउनुभयो । मैले पनि सुरूवात त hotmail बाटै गरेको थिएँ तर अहिले चलाउन छोडीएकोले पासवर्ड नै बिर्सियो । आखिर प्रयोगमा त एउटै मात्र भइरहेको छ yahoo
रमाइलो संस्मरण .....आफ्नै याद आयो सर
खुब रमाइलो पोष्ट रहेछ ।
मेरो चैं हटमेलको एकाउण्ट खोल्नुभन्दा अगाडि नै .....@हटमेलडटकम हो मेरो हटमेल भनेर विदेशतिर हुने साथीहरुलाई धक्कु लागाएको थिएँ । ठुलै धक्कु लगाएँ जस्तो लागेको पनि थियो । केहिदिनमा त्यहि ईमेल एकाउण्ट बनाउन खोज्दा नाम उपलब्ध नभएर फसाद परेको थियो । तर त्यस्तै अर्को बनाएर फेरि अपडेट गराएको थिएँ साथीहरुलाई तर हटमेल उस्तो प्रयोग गर्न नपाई याहूमा प्रवेश गरियो र अहिले त जीमेलदेखि लिएर के के के के ।
Arjun, lagvag 12 barsha agadi ko kura remembrance garaunu vayo, Sarai khushi lagyo. yak dasak ma sanchar jagat ma yati rapid change aayo,yo hamelai patauna gahro jasto lagchha.